Qaramada midoobay iyo midowga Yurub oo war kasoo saartay hadalkii gudoomiye Xaliimo Yareey. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Qaramada midoobay iyo midowga Yurub oo war kasoo saartay hadalkii gudoomiye Xaliimo Yareey.
Qaramada Midoobey ayaa muujisay sida ay ugu faraxsan tahay hanaanka doorasho oo ay soo bandhigeen guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka oo ay hogaamineyso Xaliimo Yareey, waana hanaan lagu gaarayo doorashada tooska ah ee Soomaaliya ilaa bilowga bisha Maarso ee sanadka soo aadan.
UN-ka waxey dhinacyada Soomaalida ku boorisay in la yeesho wadatashi dhexmara hogaamiyayaasha siyaasadda si loo tiigsado wadar-ogol, sidii horay loogu sii dhaqaaqi lahaa iyo shirka la filayo inuu dhexmaro dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada.
Dhanka kale Wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlanga ayaa ugu hambalyeeyay Guddoomiyaha Guddiga Madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaran, isagoo ku adkeeyay baahida loo qabo is afgarad siyaasadeed oo ku saleysan mabaa’diida la isku raacay in la furo saaxada siyaasadda, laga soo bilaabo min xulasho illaa doorasho, iyo doorashada waqtigeeda.
Qaramada midoobay iyo midowga Yurub oo war kasoo saartay hadalkii gudoomiye Xaliimo Yareey. was last modified: June 28th, 2020 by Admin
Xasan Sheekh” Hadalka Xaliimo Yarey waa Muddo kordhin Riman muddo kordhin kale”
Baarlamaanka Puntland oo Go’aan kasoo saaraya Metelaadda Gobalka Banaadir
Dhageyso:-Wareysi aanu la yeelanay gudoomiye food cade Tiyeegow ayaa isaga soo barakacay taasi oo ay keentey Abaaro